Sangano reHealth Services Board rinoti vashandi vezvehutano vari pasi pemazana mashanu ndivo chete vapiwa mari inopiwa vashandi vezvehutano vanobatwa neCovid-19 kunyangwe hazvo vamwe vari mubazi rezvehutano vachiti hurongwa hwehurumende uhwu hauna kubudiswa pachena kune vashandi vese.
Izvi viri kuuya pabuda tsvakiridzo yakaitwa nerimwe sangano ravana chiremba reZimbabwe Medical Association (ZIMA) inoratidza kuti kusvika pavhiki rapera vashandi vezvehutano vanosvika churu nemazana mashanu vanga vabatwa nedenda reCovid 19 uye vashandi vasere vakashaya.
Vashandi vanenge varwara reCovid-19 vanopihwa mari iri pakati pemazana matanhatu nechuru chemadhora ekuAmerica.
Health Services Board inoti vashandi vezvehutano mazana mana nemakumi manomwe neumwe ndivo vapiwa mari iyi chete kunyangwe hazvo kune vashandi vezvehutano vakawanda vakabatwa nechirwere ichi.
Vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association VaEnoch Dongo vati hurongwa hwehurumende uhwu hauna kuziviswa kunhengo dzavo vakati ivo sevatungamiriri vavana mukoti munyika vakatonzwawo nezvenyaya iyi pamadandemutande.
VaDongo vatiwo zvinonetsa kuti vashandi vemuzvipatara vawane mamwe magwaro anobva kuHSB ari pamadandemutande akasiyana siyana sezvo vamwe vachishanda kumaruwa. Vatiwo vamwe vanoshanda mumahofi ezvipatara zviri mumaguta vange vasina magwaro ari kunzi vatumire nasachigaro weHealth Services Board Dr Paulinus Sikosana
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctor’s Association, VaPrince Butau vanoti vakapihwa mari iyi muna Mbudzi mushure mekubatwa nedenda reCovid-19 vari pabasa vatsigirawo vakati panga pasina ziviso yakakwana nezvehurongwa hwehurumende uhwu izvo zvakaitawo kuti vanonoke kuendesa mapepa avo.
Asi vaButau vachema chema nekunonoka kuuya kwemari iyi vachiti kunyangwe hazvo vakanyora mapepa anodiwa muna Mbudzi uye vachishandira muguta reHarare, havasati vawana mari yavo iyi.
Kunyangwe hazvo vashandi vezvehutano vachiti havana kuziviswa nezvekuvapo kwemari iyi, mumashoko avakatumira vatori venhau, VaSikosana vanoti HSB yakavazivisa.